ပြောင်းဖူးခိုးတဲ့ ဖိုးသူတော် | HapEye
ရှေးရှေးတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ တောရဆောက်တည်နေတဲ့ ဆရာတော်ကြီးကို လုပ်ကျွေးပြုစုနေတဲ့ ဖိုးသူတော်တစ်ပါး ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဖိုးသူတော်ဆိုတာ ရဟန်းသာမဏေဘဝနဲ့ ရှင်ရဟန်းကျင့်ဝတ်တွေကို မကျင့်ကြံနိုင်တာကြောင့် (၈)ပါးသီလစောင့်ပြီး ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နေတဲ့ သူကိုခေါ်တာပါ။ ရှေးတုန်းကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုင်းမှာ ဖိုးသူတော်ဆိုတာ ရှိတတ်တယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ကျောင်းသားကပ္ပိယပဲ ရှိတော့တယ်။
တစ်ချိန်မှာတော့ ဖိုးသူတော်ဟာ တောရကျောင်းသို့ အပြန်လမ်းတစ်ခုမှာ ပြောင်းဖူးခင်းတစ်ခုကို ဝင်ကာ ပိုင်ရှင်မရှိဘူးအထင်နဲ့ ပြောင်းဖူးခိုးပြီး ချိုးယူပါတယ်။ပြောင်းဖူးမချိုးခင် အတွင်းက အစေ့အဆန် အောင်မအောင်သိရအောင် အပေါ်ယံအကာအရွက်ကို နွှာလှန်ကြည့်တဲ့အခါ အဆန်မပါ အစေ့မအောင်တဲ့ ပြောင်းဖူးတွေကိုသာ တွေ့ရတာမို့ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ဖိုးသူတော်က ဒီပြောင်းဖူးအခင်းပိုင်ရှင်ဟာ ညံ့လှချည်လား။ အလကားလူဖျင်းပဲ။
တောသူတောင်သားပီပီ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုမှ မကျွမ်းကျင် ပြောင်းဖူးတစ်ခင်းကိုတောင် ပီပီပြင်ပြင်မလုပ်တတ်။ အစေ့အဆံမအောင်တဲ့ ပြောင်းဖူးခင်းနဲ့ ဘာလုပ်စားလို့ရမှာလဲ။ သူတော်တို့ လုပ်ပြစမ်းချင်တယ်လို့ ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုပါတယ်။ အဲဒီအခါ ပြောင်းဖူးခင်းထဲကို ဝင်နေတဲ့ ပြောင်းဖူးခင်းပိုင်ရှင်က ကြားတော့ မခံချင်တာနဲ့ အလို ဦးသူတော်ရယ် သူတစ်ပါးကို အရမ်းအပြစ်တင် မစောလိုက်ပါနဲ့။
တပည့်တော် အလုပ်အကိုင်ညံ့ဖျင်းလို့ ပြောင်ဖူးမကောင်း တာမဟုတ်ရပါဘူး။ အခင်းထဲက မြေကိုလည်း နည်းနည်းလောက် ငုံ့ကြည့်စမ်းပါဦး။ ဒီလောက် ပက်ကြားအပ်တွေ ကွဲထနေတဲ့ မြေပေါ်မှာ ဘယ်လိုပြောင်းဖူးက ကောင်းနိုင်ဦးမှာလဲလို့ ပြန်လည်လျှောက်ထားပါတယ်။ အဲဒီအခါဖိုးသူတော်က အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်ပြီး ဟုတ်ပါ့ကွာ၊ ဒကာပြောမယ်ဆိုလဲ ပြောစရာပဲ။ ပက်ကြားတွေ အက်ကွဲနေတာကလည်း ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ ဟိုးဘက်ကမ်းနဲ့ ဒီဘက်ကမ်းလောက် ကျယ်တယ်။
မြေကလည်း ဒီလောက်ညံ့ရသလားလို့ မြေကြီးကို အပြစ်ဆိုတဲ့အခါ မဟာပထဝီမြေကြီးက ထပြီး အားကျမခံ ဒီမှာဖိုးသူတော် မတရားမပြောပါနဲ့ မြေကွဲတာကိုပဲ အပြစ်တင်နေတယ်။ မိုးမရွာတာကိုတော့ မပြောဘူး။ ဒီနှစ်မိုးက သင်္ကြန်မိုးလောက်တောင်မှ သဲသဲမဲမဲရွာတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ဖိုးသူတော်လည်း မိုးကိုမော့ကြည့်ကာ အင်း . . . မြေကြီးပြောမယ်ဆိုလည်း ပြောစရာပဲ မိုးကလည်း ဟန်မကျ အလုပ်မဖြစ်အောင် ရွာဖို့နေနေသာသာ ကောင်းကင်မှာ မိုးတိမ်ဆိုတာတောင် တစ်တောင် တစ်ထွာလောက်မှမမြင်ရ။
ဒီလောက် မိုးခေါင်နေမှတော့ မြေကြီးလည်း ပက်ကြားကွဲအက်မှာပဲ။ မိုးကိုက မဟုတ်တာပါလို့ အပြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါ ကိုရွှေမိုးက အလို ဦးသူတော်က မိုးမရွာတာကိုသာမြင်တယ်။ တိုင်းပြည်ရှင် တရားမစောင့်တာကိုတော့ ဘာကြောင့် ထည့်မပြောတာလဲ မိုးလေဝသဆိုတာ ပြည့်ရှင်မင်းနှင့်တကွ လူအများ တရားစောင့်မှ မှန်နိုင်တော့မှာပေါ့လို့ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုး ပြန်ပြောသတဲ့။ ဖိုးသူတော်လည်း အင်း . . . ဟုတ်ရှာမှာ ဟုတ်ရှာမှာလို့ဆိုပြီး နန်းတော်သို့ဝင်ကာ ဘုရင်မင်းမြတ်ကို အိုအရှင်မင်းကြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ ဦးစီးနာယက ဘူမိပါလရေမြေ့ရှင်ဆိုတာ လောကပါလတရား(၂)ပါး၊ သတ္တိ(၃)ပါး၊ သင်္ဂဟတရား(၄)ပါး၊ ဗလ(၅)တန်၊ နာယကဂုဏ်(၆)ခု၊ အပရိဟာနိယတရား(၇)ပါး၊ ရာဇဂုဏ်(၈)စုံ၊ နဝရတ်(၉)သွယ်၊ ရာဇဓမ္မ(၁၀)ပါးဆိုတဲ့ မင်းကျင့်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံရပါတယ်။
ယခုအခါ ဒကာတော်မင်းကြီး တရားမစောင့်တာမို့ နေပြည်တော်မှာမိုးမရွာတာ ကြာမြင့်လှပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ဒကာတော်မင်းကြီးအနေနဲ့ ဥပုသ်ဆောင်ဝင်ပြီး တရားကျင့်သုံးသင့်လှပါတယ်လို့ သံတော်ဦးတင် လျှောက်ထားပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဘုရင်မင်းကြီးက ဦးသူတော် နေပြည်တော်မှာ မိုးမရွာတာကြောင့် ကျွန်ုပ်ကိုပဲ အဆိုးမပြောပါနဲ့။ အခု ဦးသူတော်ရဲ့ ကံလုပ်ရပ်ကိုပဲ ပြန်ကြည့်ပါဦး။ သူတော်ဆိုတာ သူတော်အလုပ် လုပ်ရမှာပေါ့။ မိုးမရွာတာကိုပဲ အပြစ်ပြောတယ်။ ကိုယ်မသမာတာကိုတော့ ထည့်မပြောပါလားလို့ ပြန်လည် လျှောက်ထားတဲ့အခါ ဖိုးသူတော်လည်း ရှက်သွားကာ သြော် . . . ဒကာတော် ရေမြေ့ရှင် ပြောတာလည်း မှန်တာပဲ။
ငါ့ကိုယ်က မသမာတော့ ဘယ်မှာလာပြီး မိုးရွာတော့မှာလဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ငါ့ ကံ့လုပ်ရပ်မကောင်းလို့ ပြောင်းဖူးဆိုးနဲ့ တွေ့ရတာပဲ။ ဒီနေ့ကစပြီး သူတော်ပီပီ နေတော့မယ်။ ဘယ်တော့မှ သူများဥစ္စာ မခိုးတော့ဘူးလို့ ပြန်ပြောသတဲ့။ ဒီဓမ္မပဒ ပုံပြင်ကလေးဟာ ရိုးရိုးကျဉ်းကျဉ်းကလေး ဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆန်းဆန်းကြယ်ကြယ် အတွေး နယ်ချဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဒီပုံပြင်ကလေးက အဓိကပေးလိုတဲ့ သတင်းစကားတွေကတော့
သတ္တလောကနဲ့ သြကာသလောက(တစ်နည်း) လူနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဟာ အချင်းချင်း အညမည အပြန်အလှန် မှီခိုကြရတယ် ဆိုတာရယ်။
မိမိမှီခိုရာ လောကဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံး သာယာလှပကောင်းမွန်ဖို့ရာ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စီကိုယ်င တာဝန်ရှိကြတယ် ဆိုတာရယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ့်လောကဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ထားနဲ့ ထိုက်တန်သလိုသာ ရတယ်ဆိုတာ တွေပါပဲ။
ဓမ္မပုံပြင်များမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြ ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Previous: ဝယ်သူတွေအကြောင်း သိပါ